बालसंरक्षण र सुरक्षाको परामर्शमार्फत परिवर्तन गर्ने स्थानीय विशेषज्ञताको विश्वव्यापी सञ्जाल ।
Read case studies by organisations we've worked with
दक्षिण—दक्षिणको सञ्जालमा सबैजनालाई स्वागत छ । यो सञ्जालले बालसंरक्षण र सुरक्षाको सवालमा परामर्श प्रदान गर्दछ । ऋजष्मिज्यउभ ग्प् र यसका साझेदार संस्थाहरु लामो समयदेखि बालसंरक्षण र सुरक्षा प्रणालीमा विशेषज्ञता हासिल गरेका छन् र उनीहरूले कार्यान्वयन गरेका बालसंरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी क्रियाकलापहरुबाट बालबालिका लाभान्वित भएका छन् । ऋजष्मिज्यउभ ग्प् ले बालसंरक्षण र सुरक्षाको परामर्शका सम्बन्धमा हालका बर्षहरूमा साझेदार संस्थाहरुको विकासका लागि सहयोग गर्ने, सुरक्षाका मापकहरुको कार्यान्वयन र सबलिकरण गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिरहेको छ । यस्ता प्रकारका कार्यहरुले जोखिममा परेका तथा पर्न सक्ने बालबालिकाको सहयोगका लागि टेवा पुग्नेछ र साझेदार संस्थाहरुले पनि आफ्ना अनुभवहरु बालबालिकाको संरक्षण र विकासमा बालसंरक्षण र सुरक्षाका प्रणालीहरु लागू गर्नेछन् ।
दक्षिण—दक्षिणको सञ्जालको परिचय
We love these new Disability-inclusive Child Safeguarding Guidelines produced by @AbleChildAfrica. This fantastic tool will help everyone who uses it to make sure all children’s lives are safer. Thank you, Able Child Africa #inclusion #safeguarding #child https://t.co/Af4jLD3M81
परामर्शको नमुनाः साथीदेखि साथीसम्म
ऋजष्मिज्यउभ ग्प् ले सँधै आफ्ना साझेदार संस्थाहरूसँग विविध प्रकारको सम्बन्ध विकास गर्न प्रयास गरेका छ । हाम्रो मुख्य काम आफ्नो उद्देश्य र कार्यसुची पूरा गर्न साझेदार संस्थाहरू पहिचान गर्नु भन्दा उनीहरूले काम गरिरहेको क्षेत्र र विषयमा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नु रहेको छ । हाम्रा साझेदार संस्थाहरू अत्यन्तै जोखिममा परेका सीमान्तकृत बालबालिकाप्रति केन्द्रीकृत छन् जुन विषयमा अन्य संस्थाहरुले ध्यान दिन सकेका छैनन् । हामीले यिनै साझेदार संस्थाहरुको साथ र सहयोगमा जोखिम अवस्थामा रहेका बालबालिकासँग प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने तरिकाहरू विकास गरेका छौँ । हामीले साझेदार संस्थाहरुको आफ्नै परिस्थिति र वातावरण अनुसारको सान्दर्भिक बाल संरक्षण नीति हुनुपर्दछ भनेर धेरै वर्षदेखि भनिरहेका छौँ र ती नीतिहरु बनाउन, सबलिकरण गर्न, नीतिहरुको पुनरावृत्ति गर्न र नीतिको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने कार्यमा साझदार संस्थाहरुसँग काम गरेको छ ।
यसको अर्थ अहिले यी साझेदार संस्थाहरू बालसंरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी सिप र क्षमताको सहितको तालिम प्राप्त गरी आफ्नै देश तथा क्षेत्रमा समान अवस्था भएका अन्य संस्थाहरुलाई तालिम प्रदान गर्न सक्षम छन् । साझेदार संस्थाहरु अन्य संस्थाहरूका लागि नियमित र उपयुक्त प्रकारको सहायताको विकास गर्न योग्य छन् । जुन देशहरूमा राम्रो बालसंरक्षण र सुरक्षाको अभ्यास कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरिएको छ त्यहाँ वास्तवमा राम्रो बुझाई पनि रहेको छ । संरक्षण र सुरक्षा बालबालिका र वयस्कहरूको लागि एक मात्र राम्रो चीज हुन सक्छ जुन हामी सबैले यसैमा काम गरिरहेका छौँ ।
दक्षिण—दक्षिणको सञ्जालले गत बर्षबाट नै प्रभावकारी काम गरेको छ । सन् २०१८ मा ६ वटा देशका १३७ संस्थाहरुका ४३४ कर्मचारी लगायत संस्थाका सदस्यहरुलाई लागि तालिम प्रदान गरिएको थियो । करिब ६५,००० बालबालिका यस कार्यबाट लाभान्वित भएका छन् । यदि तपाईँ फरक तरीकाबाट बालसंरक्षण र सुरक्षा नीतिहरुको विकास गर्न चाहनु हुन्छ भने हामी तपाईलाई यस कार्यका लागि स्वागत गर्दछौँ ।
सम्पर्कमा रहनुहोस ।
समाचार प्राप्त गर्नेविकल्पहरु
तालिमको सबैभन्दा उपयोगी पक्ष इन्टरनेटमा सुरक्षित रहने उपायको बारेमा सोच्न मद्दत गरेको विषय थियो । स्वाभाविक रूपमामानिसहरूले बालसंरक्षणलाई आमने सामने हुदा मात्र सरोकार हुन्छभन्ने सोच्दछन्। तर हामी हाम्रा कार्यक्रमहरूमा धेरै नयाँ प्राविधिक कुराहरुको प्रयोग गर्दछौं र हामीले ईन्टरनेटबाट पनि बालबालिकालाई सुरक्षितराख्ने विषयलाई हाम्रो उत्तरदायित्वहरूको रुपमा लिएका छौँ। यसले हामीलाई वास्तविक गतिमा अगाडि बढाउन सक्षम बनाएको छ र हामीले पनि एउटा नयाँ अवधारण बनाउन सक्यौँ । फलस्वरूपहामीले बालसंरक्षण र सुरक्षाको लागि जिम्मेवारी प्रदान गर्न एकजना सञ्चालक नियुक्त ग¥यौं र जसले हाम्रो बालसंरक्षण निितको पुनरावलोका÷समीक्षा र अद्यावधिक गर्नुभयो । हामीले परियोजना भ्रमण मार्फत हाम्रा साझेदारसंस्थाहरुको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नका लागि नयाँ चेकलिस्ट बनाएका छौं । त्यसकारण हामी उनीहरूले गरेका कामको बारेमा बुझ्न र जान्नका लागि सम्बन्धित प्रश्नहरू सोध्छौँ ।
हामीले ऋजष्मिज्यउभ ग्प्को सहयोगमा बेलायतको कार्यालय र क्षेत्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरूका लागि लन्डनमा धेरै तालिमहरु आयोजना गरेको थियौँ । तालिम पछिहामीलेएकजना बालसंरक्षण अधिकारी नियुक्त ग¥यौँ । उनको जिम्मेवारी आफ्नो दैनिक कामहित संरक्षण र सुरक्षाको लागि आधा समय दिनुपर्ने थियो । उनलेहाम्रो साझेदार संस्थाहरूको संरक्षण र सुरक्षाको सवालमा अझ बढी व्यवस्थित तरिकाले ज्ञज्ञकाम अगाडि बढाउन सक्षम भए । उनले साझेदारहरुको कामको कार्यान्वयन, लेखाजोखा, मुल्यांकन, उनीहरुको बुझाईको बारेमा सुक्ष्म रुपमा अध्ययन गरेर सहयोग गर्नु पर्ने क्षेत्रकोपहिचान गरे । अब हामीसँग हाम्रो साझेदारहरूको लागि नियमित रुपमा संरक्षण र सुरक्षासम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने योजना छर ऋजष्मिज्यउभ ग्प्ले हामीलाई केन्याको साझेदारसंस्थासँग परिचय गराएको छ । बालसंरक्षणको विषयलाई अझ बढी प्रभावकारी र व्यापकबनाउनलाई तालिमहरु बढीमात्रामा आयोजना गर्नेयोजना छ । यसदे बहिरा बालबालिकाको संरक्षण र सुरक्षामा विशेष योगदान गर्नेछ ।